Kitapom-baravarana nohitsakitsahin'ny vy manokana Ouzhan
Ny faritra vy dia misy ampahany nohomboana. Ny metaly takelaka dia vokatra narovan'ny teknolojia vy. Tsy afaka manao tsy misy vy vy na aiza na aiza amin'ny fiainantsika isika. Ny metaly metaly dia amin'ny alàlan'ny familiana herinaratra, fanapahana laser, fanodinana mavesatra, fifamatorana vy, ary sary an-tsary. Izy io dia novokarina tamin'ny alàlan'ny sary, fanapahana plasma, fanamafisam-peo, famolavolana horonan-taratasy, fametahana metaly, famonoana maty, fanapahana jet jet ary fanamafisam-peo.
Fitaovana fanitsiana metaly fanamafisam-pejy
Ny famaritana ao amin'ny diariny matihanina vahiny dia afaka mamaritra ny metaly taratasy toy ny: ny metaly dia rafitra miasa mangatsiaka feno ho an'ny takelaka metaly (matetika ambanin'ny 6mm), ao anatin'izany ny fanetezana, fikapohana / fanapahana / fampifangaroana, fampiononana, fangejana, fametahana, fametahana, famolavolana toy ny vatan'ny fiara), sns. Ny mampiavaka azy dia ny hatevin'ny akanjo itovizany. Ny vokatra metaly takelaka dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny maivana, ny tanjaka avo, ny fitondra herinaratra, ny vidiny ambany ary ny fahombiazan'ny famokarana betsaka. Manana fampiasa betsaka izy ireo. Ny fanodinana vy vita amin'ny takelaka dia be mpampiasa amin'ny sehatry ny elektronika, ny fifandraisana, ny indostrian'ny fiara ary ny fitaovana fitsaboana. Ohatra, amin'ny tranga solosaina, telefaona finday, ary MP3, ampahany lehibe ny metal sheet. Ho fanampin'izany, ampiasaina amin'ny famokarana fitaovana ara-pitsaboana izy io, ary ampiasaina amin'ny vatan'ny fiara sy kamio (kamio), fiaramanidina fiaramanidina sy elatra, latabatra fitsaboana, tafo fananganana (fanamboarana) ary fampiharana maro hafa.
Tombony amin'ny ampahany amin'ny fanamafisam-peo nohavaozina ao amin'ny faritry Shanghai Ouzhan
Namboarina namboarina tamin'ny takela-by vita amin'ny vy
Dingana lehibe Fanodinana stamping vy
Previous: Sombin-vy vy nohomboina
Manaraka: Ny vy vy vy welding